Mogadishu Journal » Soo laabashada Ronaldo ayaa ka caawin doonta Man Utd inay kor u qaado qiimaha horyaalka, ayuu yiri Rooney
Cristiano Ronaldo oo ku soo laabanaya Manchester United ayaa ka caawin doona kooxda Ole Gunnar Solskjaer inay u tartanto hanashada horyaalka, sida uu qabo Red Devil Wayne Rooney.
Rooney ayaa la ciyaaray Ronaldo intii uu joogay Old Trafford shan sano, isagoo kula guuleystay saddex horyaal oo Premier League ah iyo Champions League.
Kabtanka Portugal, oo dhaliyey 118 gool 292 ciyaarood dhammaan tartammadii ugu horreeyey ee uu la qaatay United, ayaa laga yaabaa inuu safto kulankiisii ​​ugu horreeyey isla marka ay sabtida la ciyaaraan Newcastle United, oo ah naadiga kaliya ee uu ka dhaliyey saddexleey Premier League intii lagu jiray xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee Manchester.
Hadda wuxuu maamulayaa Derby County, Rooney wuxuu sheegay inuusan daawan doonin soo laabashada saaxiibkiisii ​​hore laakiin wuxuu saadaaliyay Ronaldo inuu yeelan doono “saameyn aad u weyn” markiisii ​​labaad.
“Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka,” ayuu Rooney u sheegay suxufiyiinta ka hor kulanka Derby ay Jimcaha la yeelan doonaan Birmingham City.
“Cristiano wuu garan doonaa naftiisa inaysan u noqon doonin mid isaga u fudud ama toos ah sidii ka dhacday Spain ama Italy.
“Cristiano wuxuu noqon doonaa ciyaaryahan aad u weyn, waxaan u maleynayaa inuu yeelan doono waqtiyo waa weyn xilli ciyaareedka waana hubaa inuu dhalin doono goolal badan.
“Sidaasi darteed waxaan u malaynayaa in United ay ugu dambayn diyaar u tahay inay tagto oo ay u tartanto hanashada horyaalka, runtiina waxaan dareemayaa inay tahay inay sannadkan qaadaan”.
Ronaldo ayaa seegay guushii 3-0 ahayd ee ay ka gaareen Azerbaijan xulka Portugal ka dib markii la ganaaxay ka dib digniin digniin ah oo uu kala hortagay Republic of Ireland dabaal degii goolashiisa daqiiqadii ugu dambeysay.
Xaqiiqdii, ciyaartaas 36 jirka ah wuxuu jebiyey rikoorkii gooldhalinta ragga adduunka ee Ali Daei markii uu shabaqa u soo taabtay Selecao 110th iyo 111th.
Rooney ayaana tilmaamay in qaab ciyaareedkaas uu sabab u ahaa in saaxiibkiisii ​​hore uu ku horumaro Premier League.
“Waxaan aragnay, kulankii Ireland, waxa uu sameeyo,” ayuu Rooney hadalkiisa sii raaciyay.
“[Labadii daqiiqo ee la soo dhaafay, wuxuu dhaliyaa dhowr gool, madaxyo waaweyn, si uu saameyn weyn ugu yeesho Premier League.
“Waa horyaal jir ahaaneed, laakiin wuu ogyahay taas, maxaa yeelay hore ayuu uga soo ciyaaray, marka waxaan hubaa inuu diyaargaroobay oo diyaar u yahay inuu tago oo uu mar kale goolal u dhaliyo United”.